Cote D'Ivoire iyo Golaha Dalxiiska Afrika waxay wadaagaan Aragti Dahabi ah
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Guddiga Dalxiiska Afrika » Cote D'Ivoire iyo Golaha Dalxiiska Afrika waxay wadaagaan Aragti Dahabi ah
Ujeeddada Guddiga Dalxiiska Afrika waa in dib loogu magac daro Dalxiiska Afrika oo midaysan isla markaana dib loogu qoro taariikh cusub Qaaradda Afrika iyada oo loo marayo Dalxiiska wixii ka dambeeya COVID-19. Hogaamiyaasha Ivory Coast way isku raacsan yihiin waxayna ugu yeeraan Aragtida Dahabiga ah.
Xiriirka Qaranka ee Isboortiga martigelinta ee Ivory Coast wuxuu si rasmi ah ugu biirayaa Guddiga Dalxiiska Afrika, Kaliya hab midaysan oo Afrikaan ah ayaa ka faa'iideysan doona qaaradda.
Guddiga Dalxiiska Afrika ayaa u magacaabaya safiirkooda Cote D'Ivoire
Gudoomiyaha Gudiga Dalxiiska Afrika Cuthbert Ncube ayaa ka wada hadlay qaab loo sii horumarin karo warshadaha socdaalka iyo dalxiiska ee Hooyada Afrika wixii ka dambeeyay COVID-19 waxayna heshay gacmo furan.
Intii uu ku gudajiray isdhexgalka qorshaysan ee uu lalahaa daneeyayaasha dalxiiska ee Ivorian, Gudoomiyaha Gudiga Dalxiiska Afrika (ATB) Mudane Cuthbert ayaa maanta la kulmay Xiriirka Qaranka ee Warshadaha Soo-dhawaynta ee Cote d-Ivoire. Wuxuu la wadaagay aragtida ATB ee ku saabsan dib-u-habeynta waaxda dalxiiska ee Cote d'Ivoire.
Ahaanshaha dalka hogaaminaya Midowga Galbeedka Dhaqaalaha iyo Lacagta ee Midawga Afrika, Cote d'Ivoire oo keli ah waxay ka dhigtaa 45% waxsoosaarka ururka la sheegay inuu ka kooban yahay 8 dal. Waxay muujineysaa awooda dhaqaale ee wadanku ku matalo gobolka.
Shirka waxaa goobjoog ka ahaa Gudoomiyaha FNIH-CI, Mr LOLO Diby Cleophas oo ay weheliyaan qaar ka mid ah saaxiibadiisa dhow, iyo Mr Joseph GRAH Safiirka cusub ee ATB ee Cote d'Ivoire.
Intii kulanku socday, Guddoomiyaha ATB wuxuu uga mahadceliyey ka soo qeybgalayaasha soo dhaweynta diirran ee ay u sameeyeen.
Wuxuu soo bandhigay aragtida ATB ee ah in dib loogu magac daro dalxiiska iyo in dib loo qoro taariikh cusub oo qaarada Afrika ah iyadoo la wajahayo xaalada adduunka.
Ujeeddadu waa in dib loogu celiyo Afrika meeshii ugu wanaagsanayd ee dalxiis ee xilligii safmarka COVID19.
"Afrika waa hooyada aadanaha", ayuu yiri Ncube.
Sidaa darteed ujeedka booqashadiisa Cote d'Ivoire waxay ahayd inuu u ololeeyo dhammaan daneeyayaasha Ivorian inay gacmaha is qabsadaan oo ay taageeraan tan aragti dahab ah .
Ncube wuxuu yiri .: Afrika waa inay u istaagtaa sidii mid loo gaari lahaa himiladan dahabiga ah. Gaar ahaan gaar ahaan waxaa muhiim ah in la jebiyo xuduudaha iyo maskaxda dadka Afrikaanka ah ku haysa ku tiirsanaanta siyaasadaha reer galbeedka lagana hor istaago inay gaaraan aayahooda. ”
Wuxuu sidoo kale rumeysnaa in tani ay fursad u tahay jilayaasha dalxiiska inay dib uga fikiraan waaxda dalxiiska oo ay dib ugu magacdaraan hoostaga hoggaanka cusub ee urur sida ATB oo sida muuqata u muuqda hoggaan adag.
Mudane Cuthbert wuxuu horey u ahaan jirey saraakiil UNWTO caan ka ah barnaamijkeeda xiriirka la leh. Ururada ayaa ilaaliya Dr Taleb Rifai wuxuu ahaa laba xilli Xoghayaha Guud ee UNWTO.
Dhanka kale, kulanka ayaa looga hadlay caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dalxiiska Afrika. Waxaa ka mid ah qiimaha duulimaadyada qaaliga ah, la'aanta duullimaadyada tooska ah ee isku xiraya waddamada Afrika, dalxiis aan horumarsaneyn oo dalxiis iyo caafimaad ah oo wax weyn u tari kara Dowladaha. Ncube iyo Cleophas ayaa sidoo kale isku raacay la'aanta siyaasado dalxiis oo isku xirnaansho iyo iswaafajin ah oo ay tahay in lagu maamulo dalxiiska Afrika.
Qoraalkaas, ayuu Guddoomiyaha ATB wuxuu codsi ugudbiyay Xiriirka Isboortiga Isboortiga ee Cote d-Ivoire si uu ugala soo dagaallamo garabsiinta ATB guul weyn iyo ifinta Afrika oo ah waddan hooyo.
Ugu dambeyntiina isaga oo ku hadlaya magaca asxaabtiisa, guddoomiye LOLO Diby Cleophas wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay isqorista ururkiisa FNIH-CI oo xubin xubin ka ah Golaha Dalxiiska Afrika wuxuuna ballan qaaday inuu xiriir joogto ah la yeelan doono Safiirka ATB Mr. Joseph GRAH si loo sii horumariyo. xiriirka.
Ivory Coast waxay ku heshiiyeen istiraatiijiyad hawlgal si kor loogu qaado safafka dalxiiska iyadoo la raacayo aragtida iyo tilmaamaha ATB
Dhamaadka kulanka waxaa laga qaaday sawir si aan loo noolaan karin booqashada Gudoomiyaha ATB ee xafiiska.
Africa Safiirka Covid-19 Martigelinta Taleb Rifai Dalxiiska
Faahfaahinta IATA 2020 waxqabadka amniga diyaaradda
Caruur Gaajo u dhimatay oo la iska indho tiray
U qeylo dhaan Ukraine kulanka Xoog-galka Xubnaha WTTC
Kobcinta Awooda Dalxiiska: Sandals Resorts "40 For 40...
Cunard wuxuu iskaashi la sameeyay 'Indiana Jones of the...
Gurmadka Diyaarada Rwanda Cimilada Xun ee Entebbe awgeed
Cuntooyinka Kelyaha-Saaxiibtinimada leh ee ku jira Buugga-karinta Cusub
Kenya waxay soo afjartay dhammaan xannibaadaha ka haray COVID-19
Sidee bay dadka Maraykanku u seexdaan inta lagu jiro COVID-19?